Waxaa la afduubtay iyada oo Silvia Romano ah: waxey soo noqotay iyada oo Caasha muslim ah - NorSom News
Waxaa la afduubtay iyada oo Silvia Romano ah: waxey soo noqotay iyada oo Caasha muslim ah
Gabar dhalinyaro ah oo Talyaaniga u dhalatay oo howlaha gargaarka ka shaqeyn jirtay, oo bishii Novembar ee sanadkii 2018 lagu afduubtay gudaha waddanka Kenya, ayaa waxaa dib loogu celiyay dalkeeda hooyo.
Silvia Romano, oo ah 25-jir, ayaa markii ay Rome ka degtay waxaa hab siiyay waalidkeed iyo walaasheed, waxaana garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyay oo sugayay imaatinkeeda ra’iisul wasaaraha Talyaaniga iyo wasiirka arrimaha dibadda.
Silvia Romano oo sanad iyo bar aan warkeeda la helin, ayaa sheegtay inay qaadatay diinta islaamka, magaceeduna uu hada yahay Caaisha. Iyada oo sii raacisay inaysan jirin cid ku qasabtay qaadashada diinta islaamka, balse ay tahay go´aan ay iyadu iskeed u dooratay.
Ciidammada sirdoonka Talyaaniga ayaa sheegay in xaqiijinta soo daynta gabadhaasi ay gacan ka gaysteen Soomaaliya iyo Turkiga.
Waxaa la rumaysnaa in markii dambe loo kaxeystay gudaha Soomaaliya.
Aabaha dhalay Silvia, Enzo Romano ayaa sheegay inuu “farxad weyn dareemayo”. Maadaama ay nolo ugu soo noqotay gabadhiisii.
Soo deynta Silvia Waxaa loo garaacay gambaleelka kaniisadda weyn oo magaalada Milano, dadkuna waxa ay ka mashxaradaynayeen barsooyinka magaalada Milano ee ay ka soo jeedo Ms Romano, iyada oo guud ahaan dadku magaalada ay u dabaaldageen soo sii deynta gabadhoodii horey looga afduubtay.
Previous article(Daawo): Helsedirektoratet: Dadaalkaaga ayaa isbadal saameyn kara ee sii wad sameynta arrimahan
Next articleBergen: 41 sano jir noqday, qofkii ugu da´da yaraa ee Corona-virus Norway ugu geeriyooda.